Maamulka gobolka Banaadir oo mamnuucay suuqa been abuurka lagu farsameeyo ee Cabdalla shideeye – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maamulka gobolka Banaadir oo mamnuucay suuqa been abuurka lagu farsameeyo ee Cabdalla shideeye
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane iyo gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda iyo Amniga ee gobokka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Suuqa Bakaaraha ayaa ku dhawaaqay in si rasmi ah loo mamnuucay jiritaanka suuqa lagu sameeyo dukumentiyada been abuurka ah ee loo yaqaano C/lla Shideeyo.
Mas’uuliyiinta ayaa uga digay dadka ku shaqeeysta Been abuurka Cabdalla Shideeyo iney sii wadaan howlaha suuqaasi, iyagoo ku gooddiyay in sharciga la hor geyn doono ciddii lagu arko iyadoo ku howlan shaqada been abuurka ah ee Cabdalla shideeyo.
C/fitaax Cumar Xalane Afhayeenka maaamulka gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in hey’adaha ammaanku ay il gaar ah ku heyn doonaan dadka ku howlan been abuurka Cabdala Shideeye, islamarkaana talaabo adag laga qaadi doono ciddii lagu qabto arrintaasi.
Afhayeenka ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad lagu soo bandhigayay natiijada howlgal ay maanta ciidamadu ka sameeyeen suuqa Bakaaraha, kaasoo lagu soo qabtay Afar qofood oo lagu tuhmayo iney ka tirsanyihiin maleeshiyaadka Shabaab.
Madaxweynihii hore ee Dowlada Israel Shimon Peres oo geeriyooday